Qalab Cusub oo sahlaya in aad Shumiso Jaceylkaaga oo kaa Fog oo lasoo saaray (Halkaan ka Daawo Qalabkaas ) - iftineducation.com
iftineducation.com – Nin Cilmi baare ah oo u dhashay Dalka Singapore oo lagu magacaabo Hooman Samani ayaa hindisay soona saaray qalab Cusub oo sahlaya in aad ka shumiso qof kaa fog.
Qalabkan Cusub ayaa ah mid kasameysan xinjir ama caag kaas oo la sheegay in masaafo dheer aad ka shumin karo lamaanaha aad jeceshay oo kaa fog.
Sanad kahor ayaa wiil arday ah oo u dhashay dalka japan waxaa laga qoray maqaal ku aadan qaabka uu ugu shaqeyn jiray mishiin awoodi kara in shumiska masaafo dheer wax ka shumiyo ama ka baashiyeeyo iyadoo laga anba qaadayo fikradaasi ayaa hada lagu guuleystay in la hormariyo qalabkan.
qalabkan sida banooniga ah oo masaafo dheer wax ka shumin karo marka lafiiriyo qalabkaani ayaa culimida baarayaashu wax ey sheegayaan inaanu meesha kasaareynin shumiska jecelka hase yeeshee uu yahay qalab caag ah oo ka fiican wax la’aan ah.
Qalabkan sida Banooniga ayaa sidoo kale la sheegay in uu soo gudbinayo Dhawaq Naxariis badan oo qofka dareen galinaya waxa uuna suurto galinaya in Jaceylkaaga oo ka afog aad ka shumiso qalabkan.
Qalabkan Cusub ee hada lasoo saaray ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo Ceynkan oo kala ah dad badana ee soo dhaweeyeen kuna sheegeen Tiknoolajiyada Casriga in e qeyb ka tahay.
Dadka qaarkood ayaana aad ula yaabay markii ee arkeen Qalabkan sida Cinjirka ama Banooniga ah oo laga shumin karo qof kaa fog lana dareemayo dareenka shumiskaasi.